जीत शेरचनलाई जिताउन काँग्रेस नेता सिटौला बुर्तिवाङमा : आज राजकुतमा चुनावी सभा ! – ebaglung.com
२०७६ मंसिर २, सोमबार ०२:५८	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
बुर्तिवाङ २०७६ मंसिर २ । नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद सिटौला मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसका उमेदवारहरुलाई जिताउन बडीगाड गाउपालिकाको खारबजार हुँदै आईतवार बुर्तिवाङ आईपुगेका छन् । नेता सिटौला सँगै काँग्रेसका केन्द्रिय सदस्य शंकर भण्डारी, नेविसंघका निवर्तमान उपाध्यक्ष डिल्लीराम सुवेदी सहितको टोली बुर्तिवाङ आएको छ ।
बागलुङ क्षेत्र नं. २ (ख) प्रदेशसभा सदस्य पदको उपनिर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसबाट उमेदवारी दिएका जीत शेरचनलाई जीताउन सिटौला नेतृत्वको टोली बुर्तिवाङ आएको हो । पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका सिटौलाले आज सोमबार निसीखोला गाउँपालिकाको राजकुतमा हुने चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । हिँजो मात्रै राजकुतमा वाम गठवन्धनको चुनावी सभा सम्पन्न भएको थियो भने अस्ति राप्रपाले चुनावी सभा गरेको थियो ।
सिटौलाले आईतबार बडीगाड गाउँपालिकाको वडा अध्यक्षका उम्मेदवार र स्थानिय नेता तथा कार्यकर्ता सँग भेटघाट एवं छलफल उपनिर्वाचनमा आफ्ना उमेदवारहरुलाई विजयी गराउन सक्रियताका साथ आग्न आग्रह गरेका थिए ।
बागलुङ जिल्लाको २ नं क्षेत्रबाट ख प्रदेश सभासदस्यमा बामगठबन्धनबाट विजयी बनेका राजमोका टेकबहादुर घर्तीको असामयिक निधनबाट रिक्त रहेको पदमा यहि मंसिर १४ गते उप निर्वाचन हुँदैछ । यस उपनिर्वाचनमा राजनीति दलहरुबाट ८ जना र स्वतन्त्र २ जना गरी १० जना चुनावी मैदानमा रहेका छन् । एकजना स्वतन्त्र उमेदवारले मनोनयन फिर्ता नललिएपनि बामगठबन्धनको समर्थनमा चुनावी दौडबाट हटेको बताएका छन् । तर उनको पक्षमा चुनाव प्रचार अभियान भने व्यापक देखिन्छ । यस क्षेत्रको चुनावी माहौललाई हेर्दा नेपाली काँग्रेस र सयुंक्त बामगठबन्धन बीच नै तीब्र प्रतिष्पर्धा रहने आँकलन गरिएको छ ।